Nhau - Chii chinokanganisa hurefu hwehupenyu hwemwenje ye LED yekuputika-chiratidzo?
Chii Chinokanganisa Hupenyu Hurefu hweMagetsi ekuputika-chiratidzo?
Rambi rekuputika-chiratidzo chemwenje rudzi rwekuputika-chiratidzo chemwenje. Nheyo yaro yakafanana neiya yekuputika-chiratidzo cherambi, kunze kwekuti mwenje sosi ndeye LED mwenje sosi, iyo inoreva mwenje ine dzakasiyana nhanho matanho anotorwa kudzivirira iyo yakakomberedza guruva nharaunda uye gasi kubva kubatidzwa. Mwenje ye LED yekuputika-magetsi parizvino magetsi-anoponesa marita-ekupupurira-marambi, anoshandiswa mune petrochemicals, migodhi yemarasha, magetsi magetsi, gasi magaraji nedzimwe nzvimbo.
Isu tese tinoziva kuti mwenje yekuputika-kwe LED ine yakanaka simba-yekuponesa mhedzisiro uye kupenya kwakanaka. Saka chii chinokanganisa hupenyu hwe LED kuputika-chiratidzo chemwenje, uye sei kuchengetedza kunogona kuunza mabhenefiti?
Zvinhu zvakati wandei zvinokanganisa hupenyu hwe LED kuputika-chiratidzo marambi:
1. Iko kunaka kweiyo tambo ndiyo yekutanga mamiriro ayo anosarudza hupenyu hweiyo LED yekuputika-chiratidzo mwenje
Mukugadzirwa kwemuchina wemachipisi eLED, kumwe kusvibiswa kweion kusasvibisa, kuremara kwepa lattice uye nezvimwe zvigadzirwa zvinochinja hupenyu hwavo. Naizvozvo, kushandiswa kwemhando yepamusoro yemhando dze LED ndiyo mamiriro ekutanga.
Keming's kuputika-chiratidzo mwenje inotora imwe-yepamusoro-simba mwenje mwenje bead kutevedzera lumen uye hombe brand chip dhizaini. Iyo yakasarudzika yakagadzirirwa mwenje sosi ine yunifomu fungidziro, yakakwira mwenje kutapurirana uye yakaderera kupenya.
2. Dhizaini yemarambi inyaya yakakosha inokanganisa hupenyu hwemarambi ekuputika-kwe LED
Pamusoro pekusangana nezvimwe zvinongedzo zvemwenje, mwenje unogadzirirwa inyaya yakakosha kudzora kupisa kunogadzirwa kana iyo LED yabatidzwa. Semuenzaniso, iyo yakavhenekerwa mwenje sosi mwenje pamusika (imwe 30 W, 50 W, 100 W), iyo sosi yechiedza yezvigadzirwa izvi uye nehusiku dissipation chiteshi chinobata chikamu chemoto hachina kutsetseka, semhedzisiro, zvimwe zvigadzirwa zvinokonzeresa. chiedza mushure memwedzi 1-3 yekuvhenekera. Kuora kwacho kunodarika makumi mashanu muzana. Mushure mezvimwe zvigadzirwa zvinoshandisa yakaderera simba chubhu ingangoita 0,07 W, nekuti hapana chinonzwisisika kupisa kupisa mashini, mwenje inoora nekukurumidza kwazvo. Izvi zvitatu zvisiri zvigadzirwa zvine zvakaderera zvehunyanzvi zvemukati, zvakachipa mutengo uye hupfupi hupenyu hurefu.
3. Lamp magetsi emagetsi akakosha zvakanyanya kuhupenyu hwe LED kuputika-chiratidzo rambi
Kunyangwe iyo magetsi emwenje ari anonzwisisika anochinjawo hupenyu hwayo. Nekuti LED chishandiso chinotyairwa parizvino, kana magetsi aripo achichinja zvakanyanya, kana kuwanda kwemagetsi spikes kukwirira, zvinokanganisa hupenyu hweiyo mwenje sosi ye LED. Hupenyu hwekupihwa simba pacharo zvakanyanya zvinoenderana nekuti iro dhizaini dhizaini inonzwisisika. Pafungidziro yemagetsi ekugadzira dhizaini, hupenyu hwesimba remagetsi zvinoenderana nehupenyu hwezvinhu zvacho.
4. Iko kukanganisa kwetembiricha yehupenyu pahupenyu hwemwenje ye LED kuputika-chiratidzo
Hupenyu hupfupi huripo hwemarambi eLED hunonyanya kukonzerwa nehupenyu hupfupi hwemagetsi, uye hupenyu hupfupi hwemagetsi hunokonzerwa nehupenyu hupfupi hweiyo electrolytic capacitor. Chimwe chiitiko cheiyo index yehupenyu ye electrolytic capacitors ndeyekuti inofanirwa kuratidza hupenyu huri pasi peanoshandira nharaunda tembiricha yemadhigirii mangani, uye inowanzo domwa sehupenyu huri pasi peyakajairika tembiricha ye 105 ℃. Iyo yakaderera iyo ambient tembiricha, yakareba iyo sevhisi hupenyu hweiyo capacitor. Kunyangwe yakajairwa electrolytic capacitor ine hupenyu hwemaawa chiuru inogona kusvika maawa zviuru makumi matanhatu nemazana matanhatu patembiricha iri pakati pe45 ° C, iyo inokwana mwenje wakajairika weLEM une hupenyu hwemazita e50,000. Akashandisa.
Kugadziriswa kwemazuva ese kwe LED kuputika-chiratidzo mwenje:
Isu tinotenga yakanaka mhando mwenje wekuputika-chiratidzo mwenje unogona kushandiswa kwemakore matatu, asi iwe kazhinji hauna hanya nekuchengetedzwa kweye LED kuputika-chiratidzo mwenje, saka unogona kungoishandisa chete kwemakore maviri, zvinoenderana kushandisa mari yakawanda, tinoita sei mwenje wekuputika-chiratidzo kweL LED Hupenyu hwakareba kiyi, ngatitaurei zvishoma nezve zvishoma zvinhu pazasi:
1. Gara uchichenesa guruva uye mamwe marara ari mudzimba dzemarambi (kana asina kucheneswa kwenguva yakareba, guruva rinonamatira kumwenje kuvharidzira kupisa kunoburitswa nemwenje, zvichikonzera kupisa kusadzimwa. mwenje wekuputika-chiratidzo che LED Kwakanaka kupisa kupisa kupera), kwakanaka kupisa kupisa chinhu chakakosha kuwedzera hupenyu hweiyo LED.
2. Kugadziriswa kwepakati nepakati uye kudzima kwemarambi. Zvinokurudzirwa kuti marambi asashande asina kumiswa kwemaawa makumi maviri nemana, nekuti tembiricha yemarambi inozokwira zvishoma nezvishoma panguva yebasa risingamiswe. Iyo yakakwira tembiricha, inowedzera kukanganisa pahupenyu hwerambi. Iyo yakakwirira tembiricha, ipfupi hupenyu hwemwenje. .
3. Chifukidzo chechiedza chakareruka chinogara chichichenesa guruva uye mamwe marara kuti ave nechokwadi chekufambiswa kwechiedza
4. Gara uchitarisa voltage yedunhu. Kana iyo voltage isina kugadzikana, dunhu rinofanira kuchengetedzwa nekugadziriswa.
5. Iyo tembiricha iri pakati pemarambi e LED ekuputika-chiratidzo haafanire kunge ari pamusoro pe60 degrees, uye hupenyu hwebasa hunogona kupfupiswa zvakananga ne2 / 3 kana iri pamusoro pemadhigirii makumi matanhatu.
6. Marambi anofanirwa kubatidzwa nguva nenguva panguva yekushandisa kwese.